Valverde oo ka hadlay xaalada Messi, kahor kulanka Bilbao ee furitaanka horyaalka La Liga xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020 – Gool FM
Valverde oo ka hadlay xaalada Messi, kahor kulanka Bilbao ee furitaanka horyaalka La Liga xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020
(Spain) 11 Agoosto 2019. Tababaraha Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa shaaca ka qaaday war aad u xun oo ku saabsan kabtanka kooxda ee Lionel Messi kahor kulanka furitaanka ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Ernesto Valverde ayaa qiray inaysan macquul aheyn in kabtanka Blaugrana ee Lionel Meesi uu taam u noqdo kulanka furitaanka horyaalka La Liga ee dalka Spain ay kooxda Barcelona kula ciyaari doonto Athletic Bilbao habeenka Jimcaha ee soo aadan.
Lionel Messi ayaa seegay safarkii kooxda Barca ee dalka Mareykanka kaddib dhaawac ka soo gaaray lugta inta lagu gudi jiray tababarka.
Wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu Valverde kaga hadlay xaalada Messi wuxuuna yiri:
“Wuxuu ku jiraa marxaladda soo kabashada, laakiin ma aqaano inuu qeyb ka noqon doono kulanka Athletic Bilbao iyo inkale… Waxay umuuqataa inay adag tahay”.
Si kastaba ha noqotee, Valverde ayaan la kulmin xaalad adag, kulankii ay la ciyaareen kooxda Napoli, kaddib markii ay isku muujiyeen xiddigaha Griezmann, Suarez iyo Ousmane Dembélé, intii lagu jiray kulankii ay kooxda Napoli kaga adkaadeen 4-0.
Kooxaha Yurub oo ugu hambalyeeyay Muslimiinta munaasabadda Ciidul Adxaa